सभामुखको कुर्सी नजिक पुगेका अग्नि सापकोटालाई आएको संकट | Sagarmatha TV
बडा कष्टले सभामुखको कुर्सी नजिक पुगेका सांसद अग्नि सापकोटालाई नया संकट आइपरेको छ ।
सिन्धुपाल्चोकबाट निर्वाचित सांसद सापकोटालाई सभामुख नबनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट दायर गरेपछि नयाँ संकट देखा परेको हो ।
सभामुखको लागि चार महिनादेखि चलेको बहस र विवादपछि मंगलवार उनको मात्र उम्मेदवारी परेको थियो ।
उनी माघ १२ गते संसदमा हुने निर्वाचनबाट निर्विरोध निर्वाचित हुने तरखरमा छन । यसको ठीक दुई दिन अघि सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।
शुक्रवार ढिलो गरी रिट परेकोले यसको बारेमा सुनुवाइ आइतवार नै हुनेछ । यसैदिन सभामुखको चुनाव पनि हुनेछ । अब सभामुख पहिला कि अदालतको निर्णय भन्ने ठाउमा नेपाली राजनीति पुगेको छ ।
विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले समेत उम्मेदवारी नदिएर सापकोटालाई सभामुख बनाउन सहयोग गरेको बेलामा अचानक अदालतको यो प्रकरणले भने नयाँ तरंग ल्याइदिएको छ ।
अझै रोचक कुरा के छ भने राष्ट्रपतिको पहिलो र दोस्रो कार्यकालमा विज्ञ सल्लाहकारको भूमिकामा काम गरिरहेका सुशील प्याकुरेलले दर्ता गरेको अर्जुन लामा हत्या प्रकरणमा सापकोटाका बारेमा माघ २२ गते सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ ।
हेर्दा हेर्दैमा राखिएको यो मुद्दा अब झन कसिलो भएको छ । र, यस घटनामा पनि नयाँ तरंग के आएको छ भने, शुक्रवार नै जब वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले रिट दायर अनि लगत्तै अर्जुन लामा हत्या प्रकरणमा संलग्न भएको भनेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका राष्ट्रपतिका सल्लाहकार प्याकुरेलले दिएको राजीनामा । दुवैले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
प्याकुरेलले राजीनामा दिएर शीतलनिवासलाई विवादको घेराबाट बाहिर राखेका छन भने अर्कोतिर यो मुद्दामा अब दरोसंग लडने संकेत पनि दिएका छन । यसले सापकोटामाथिको संकट झन गहिरिने देखिन्छ ।
सापकोटालाई सभामुखको उम्मेदवार बनाउने बेलामा प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच गम्भीर वार्ता भएको थियो । सो वार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले अग्निको बारेमा मुद्दा छ भनेर अध्यक्ष दाहाललाई सम्झाएका थिए । तर दाहालले भने त्यो मुद्दाले कुनै असर नपार्ने जवाफ दिएपछि बल्ल अग्नि सापकोटालाई उम्मेदवार बनाइएको थियो ।
तर, समयको चक्र यति बलवान छ कि हिजो खास मुद्दा होइन भनेर भनिएको विषय नै यतिवेला सापकोटाको लागि थाल खाउँ कि भात खाउ बनाउन थालेको छ ।
नेकपाले सभामुख पद यतिकै टुंगो लगाएको भने थिएन । चार महिनासम्म चलेको बहस र विवाद पछि नेकपा अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहालबीच माघ ६ गते बल्ल सहमति जुटेको थियो । तर, यसपछि पनि ढुक्कको वातावरण भने बनेन ।
यसपटक सभामुख चयनको लागि नेकपालाई असाध्यै सकस परेको छ । यसको लागि उसले दुई जना पात्र सुवास नेम्वाङ र शिवमाया तुम्वाहाङफेको मन पनि दुखाएको थियो । कतिसम्म भने जादा जाँदै उपसभामुख शिवमायाले त बरु राजतन्त्र हटाउन सकियो तर पितृसत्ता हराउन सकिएन भनेर गम्भीर दुखेसो गरिन । यसका वावजुद पनि सभामुखको उम्मेदवार चयन भयो । तर, फेरि यो मुद्दा किन पेचिलो बन्यो त ?
साच्चै भन्ने हो भने नेकपाको एकता प्रक्रिया अझै सकिएको छैन । महाधिवेशन संगै नेकपाको एकता पनि सकिन्छ । पार्टी एकताको भावना र सहमतिलाई हेर्ने हो भने त्यहा एमाले र माओवादीबीच भागवण्डा भएको थियो ।
तर, जब महरा जेल परे तब पुर्वएमाले पंक्तिले सहमति उल्लंघन गर्दै सभामुखमा सुवास नेम्वाङको नाम लिन थाल्यो । यहिंबाट सहमतिमा दरार देखिन थाल्यो ।
यो प्रकरण कुन हदसम्म पुग्यो भने अध्यक्ष दाहालले सभामुख नदिने हो भने सभामुख र प्रधानमन्त्री पद साटौं सम्म भन्नु परयो । एउटा जिवन्त पार्टीमा यतिसम्म छिचोलेर विवाद हुनु भनेको एकताको धागो काँचो हुनु नै हो ।
यति मात्र होइन, विपक्षी दल कांग्रेसले सभामुख सत्तारुढ दलले टुंगो लगाउन नसकने हो भने कांग्रेसलाई जिम्मा दिनुस् हामी चलाई दिन्छौं सम्म भन्नु पर्‍यो ।
यसको मतलब नेकपा कतिसम्म तल्लो स्तरमा पुगेर बहसमा उत्रिएछ र यसको सन्देश कस्तो गएको रहेछ भन्ने वुझिन्छ ।
यो पृष्ठभुमिमा सभामुखको उम्मेदवार हुन सफल भएका सापकोटाका दुःखका दिन अझै गहिरा हुनु स्वभाविक नै हो । यति मात्र होइन, सभामुखको उम्मेदवार सापकोटालाई बनाइरहदा पनि हिजो नेकपा एमालेलाई राम्रो आर्थिक सहयोग समेत गर्ने, एमालेको उम्मेदवार पनि भएका सुवोध र सुशील प्याकुरेलले चलाएको इन्सेकले सापकोटालाई उम्मेदवार नबनाउ भनेर सार्वजनिक रुपमा वक्तब्य नै दियो ।
करिव २ दर्जन मानवअधिकारकर्मीले माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन नै गरे । सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चार माध्याममा समेत हिजो बलात्कार आरोपी सभामुख र आज हत्याको आरोपी सभामुख रहन पुगे भने यो संसदको गरिमा कति रहला ? भन्ने बहस नै चल्न थाले ।
यति मात्र होइन, नेकपा भित्रको पुर्वएमाले पक्षको मत अलि फरक पनि थियो । जस्तो उनीहरु सुवास नेम्वाङ र शिवमायाको ठाउँमा अग्नि सापकोटालाई रुचाइरहेका थिएनन ।
यसैकारण मुद्दा लड्न कै लागि सुशील प्याकुरेलले राजीनामा दिए भने संक्रमणकालीन मुद्दाको वारेमा सार्वजनिक बहस गरिरहेका त्रिपाठीले रिट नै हाले । यसले नेकपा भित्रको आन्तरिक गुटवन्दी कति हावी छ र यसको असर कुन हदसम्म पर्न सक्छ भन्ने पनि देखाउँछ ।
यस्तो अवस्थामा पनि सापकोटा यस मुलुकको सभामुख हुन सक्छन, संख्याको बलमा तर सभामुखको उम्मेदवार हुँदा सापकोटाले संसदको मान र मर्यादा अझ उचो राख्छु भनेर गरेको प्रणलाई कति मद्दत गर्ला ?